China sarudza & kurongedza kuzadzikisa sevhisi uye mumiririri | Sunson
Sarudzo yedu nekutakura zvinhu zvakabatsira sei vatengi?
Mutengi akati: Ndiri kushamisika kwazvo kuti pasuru yechigadzirwa yakanaka kwazvo, chigadzirwa chacho chakasimba, uye mutengi anogutsikana. —— chiRoma
Isu tinopa rakazara bespoke pick uye kurongedza kuzadzikisa sevhisi yakagadzirirwa kuenderana nebhizinesi rako zvido!
99.6% inotora chaiyo chiyero
Yakanyatso kubatanidzwa newebsite yako uye kutengesa mapuratifomu
Automated stock control kugadzirisa
Basa rimwe chete rezuva
Pane akati wandei sarudzo dzaunogona kuwana kwauri maringe nekugamuchira kwatinoita maodha ako ekugadzirisa.
Sarudzo yakasarudzika yevakawanda vevatengi vedu ndeyekutendera API kusangana kweedu Warehouse Management System (WMS) nemapuratifomu ekutengesa avari kushandisa kureva Shopify, Amazon, Magento, Woocommerce nezvimwe. kutumira.
Isu tinodada needu padyo yakakwana yekunhonga chaiyo chiyero. Isu tinoshandisa barcode tekinoroji kutora maodha uye timu yedu inogamuchira yakakura kudzidziswa uye maodha anogara akaongororwa kaviri pamberi pekutumira
Isu tinochengetera yakasarudzika sarudzo yemapaketi zvinhu zvinosanganisira akasiyana mabhokisi, akaputirwa envelopu bubble kuputira uye kona makona. Chikwata chedu chine ruzivo rwakawanda kuona kuti zvinhu zvese zvinotumirwa zvakarongedzwa zvakanaka, zvakanyatso nyorwa neruzivo rwekambani yako uye chero zvekuwedzera zvekushambadzira / zvekuisa zvinosanganisirwa.
Iwe unogamuchirwa kuti upe yako yekupakata kana isu tinogona kukubatsira iwe kuve neyako muchiso kurongedza kugadzirwa muChina kune ako maratidziro.
Vamwe vevatengi vedu vanobatanidzwa mukushambadzira kwekutengesa zvinhu zvavo uye Amazon FBA kutengesa. Isu tine ruzivo mukutakura kwemasanganiswa akaunganidzwa hombe.
Yedu imba yekuchengetera vane hunyanzvi mukuzadzisa zvinotumirwa kuAmazon FBA Center uye kushandisa kwavo ruzivo uye ruzivo zvinogona kukupa iwe inodhura-inoshanda uye yakapusa nzira dzekugovera.
Kana mutengi achida zvinhu zvakasiyana siyana (zveSKU) zvekutakura pamwechete, isu tinokwanisa kuunganidza maodha aya zviri nyore uye nemazvo uye nekuraira nzira dzinoshanda kwazvo dzekutumira kune chero kwaanoenda nyika.
Ship musi iwoyo
Kukurumidza kurodha kutora uye kutumira kwakakosha muecommerce. Tinogona kutora, kurongedza uye kutumira mirairo yese yaunogamuchira na4pm (Beijing Nguva) zuva rimwe chete rekutumirwa pasirese nemugwagwa wekutakura waunosarudza.
Izvi zvinogona zvakare kubatsira zvakanyanya mukuzadzikiswa kwemahara makuru-akatsigirwa nemari, uko mirairo yako yese inoda kutumirwa nekukurumidza. Tine ruzivo rwekushanda pamwe neKickstarter uye Indiegogo mishandirapamwe iyo inounza mhedzisiro yakanaka kune vatengi vedu uye avo vanopa mari.
China Sarudza & Rongedza Service
Ecommerce Sarudza & Rongedza Sevhisi
Sarudza & Rongedza Sevhisi Kutakura Uye Kuchengeta
Sarudza & Packaging Service MuChina Shenzhen
Shopify Sarudza & Rongedza Sevhisi MuChina